Telefishinadda Bulsho Iyo Eryal Oo Caqabad Ku Noqon Karra Xaaladda Nabadeed Ee Ceel-afweyn
Saturday, 07 July 2018 15:14
Telefishanadda Bulsho iyo Eryal, oo ah laba Telefishan oo madax-banaan, ayaa qayb ka noqday buun-buunita collaadda laba beelood oo walaalaha ee dirirta colaadeed ay ku dhexmaray deegaanka Ceel-afweyn. Islamarkaanna labaddan telefishin oo ka hawl-galla magaaladda Hargeysa oo ku suntan labada beelood ee dagaalamaya midkood, ayaa cod baahiyahoogga u isticmaalan kicinta beeshoodda iyo hurrinta colaadaa Ceel afweyn.
Dhacdooyinka isu-lammaan oo labaddan telefishan isu-bahaysteen, ayaa ah mid ka baxsan qaanuunka tabinta wararka dhiiladda ah ee ka imanaya deegaanadaasi colaaddu ka jirto.
Dhinaca kalena, ururka SOLJA oo warbaahinta u qaabilsan nidaaminta ayaa indhaha ka qarsadday inuu si toos ah telefishaddan uga wacyi-geliyo inay joojiyaan wararka dhiiladda ah ee ku saabsan kicinta iyo isu-dirka labaddan beelood.
Sidoo kale, Xukuumadda Muuse Biixi ayaa baahinta wararkan ku indha-dooqsata iyadoo telefishanaddan waxa talaabbo ah ka qaadin,iyadoo tebinta wararka dhiiladda ah ay isu-bedeli karrato xaalad nabad-galiyo darro ah oo ku faafta deegaanadda ku teedsan deegaanadda collaadu ka socoto.
Ugu dambayntii labaddan telefishan ayaa haddii ay siddan ku soo socdaan noqon doonna laba telefishin oo caqabad ku noqon doonna waan-waanta nabadeed ee laga waddo deegaanadaasi.
More in this category: « Dadka Maanta La Magaacabay Waxa Ka Mid Ahaa Qof Shaqo Dawladeed Oo Hore Looga Eryay Eedo Musuq” Garyaqaan Guuleed Dafac Qiso Aabo Quraan Imaad Barin »